"1 Dia namaly Elifaza Temanita ka nanao hoe: 2 Tokony handahatra hevi-dravina va ny olon-kendry, ka hameno ny kibony amin’ny rivotra avy any atsinanana va, 3 Ary hamaly amin’ny teny tsy mahasoa sy ny teny tsy mahatsara? 4 Eny, foananao ny fahatahorana an’Andriamanitra, ary tampenanao ny fivavahana eo anatrehany; 5 Fa ny helokao no manesika ny vavanao, ary mianatra ny lelan’ny fetsy hianao. 6 Ny vavanao ihany no manameloka anao, fa tsy izaho; Ary ny molotrao ihany no mamely anao. 7 Hianao va no voalohany izay nateraka ho olombelona? Na naloaky ny kibo talohan’ny tendrombohitra va hianao? 8 Isan’ny mpihevitra teo amin’ Andriamanitra va hianao, ka voarombakao ho anao irery ny fahendrena? 9 Inona no fantatrao, ka tsy mba fantatray koa, na saina azonao, ka tsy ato aminay koa? 10 Ny anti-panahy sy ny fotsy volo dia misy ato aminay, eny, olona ela niainana noho ny rainao aza. 11 Ataonao ho tsinontsinona va ny fampiononana avy amin’Andriamanitra sy ny teny natao aminao amin’ny fahalemem-panahy? 12 Nahoana no dia entin’ny fonao hianao? Ary nahoana no mipipy foana ny masonao, 13 Ka miefonefona amin’Andriamanitra hianao, sady miteniteny foana ny vavanao? 14 Inona ny zanak’olombelona no mba hadio izy? Ary izay tera-behivavy no mba ho marina? 15 Indro, ireo anjeliny aza tsy mahatoky Azy, ary ny lanitra aza tsy madio eo imasony; 16 Koa mainka fa izay vetaveta sy tena ratsy, dia ny olona izay misotro heloka toa rano! 17 Hanambara aminao aho, ka mihainoa ahy fa izay efa hitako no holazaiko, 18 Dia zavatra notorin’ny olon-kendry, fa tsy nafeniny, dia izay azony avy tamin’ny razany; 19 Ireny ihany no nomena ny tany, ary tsy nisy olona hafa firenena nisisika teo aminy. 20 Ny ratsy fanahy mijalijaly amin’ny androny rehetra, dia amin’ ny taona rehetra voatendry ho an’ny lozabe. 21 Feo mampitahotra no ren’ny sofiny; Ary na dia miadana aza izy, dia avy hamely azy ihany ny mpandroba. 22 Tsy manantena ho afaka amin’ ny maizina izy; Andrasan’ny sabatra izy. 23 Mirenireny hitady izay hohaniny izy ka manao hoe: Aiza re? Fantany fa antomotra azy ny andro maizina. 24 Fahoriana sy fahaporitana no mampitahotra azy; Mandresy azy ireo tahaka ny mpanjaka efa vonona ho amin’ny ady, 25 Satria naninjitra ny tanany hanohitra an’Andriamanitra izy Ary nirehareha hanohitra ny Tsitoha. 26 Mimaona amin’ny fahamafian-katoka hamely Azy izy, dia amin’ ny foitran’ampingany matevina, 27 Satria efa matavitavy tarehy izy, ary mivalon-kotraka ny valahany; 28 Ary monina ao an-tanàna rava izy, Dia ao an-trano tokony tsy hitoeran’olona, Izay efa voatendry ho korontam-bato. 29 Tsy hanan-karena izy, sady tsy haharitra ny heriny, ka tsy ho vokatra ambonin’ny tany ny fananany. 30 Tsy ho afaka amin’ny maizina izy; ny solofony hikainkona azon’ny lelafo; ho levon’ny fofonain’Andriamanitra izy. 31 Aoka tsy ho voafitaka hatoky zava-poana izy; fa zava-poana no ho valiny homena azy. 32 Raha mbola tsy tonga aza ny androny, dia manjo azy izany, ary tsy ho maitso ny sampany. 33 Ho tahaka ny voaloboka manintsana ny voany manta izy ary ho tahaka ny hazo oliva mampiraraka ny voniny. 34 Fa tsy ho vanona ny ankohonan’ny mpihatsaravelatsihy, ary ho lanin’ny afo ny tranon’ny mpitoroka. 35 Torontoronina fampahoriana izy ka miteraka fandozana, ary ny kibony mamorom-pitaka." Joba 15:1-35
Toa marina (2-16). Niteny araka izay hitany sy hainy i Elifaza, fa tsy araka izay hevitr’Andriamanitra. Nanome tsiny ny famalin’i Joba izy. Tsy fitenin’olon-kendry hoy izy: teny foana, fanamarinan-tena, tsy fahatahorana an’Andriamanitra (2-6); mirehareha ho mahay noho ny hafa (7-11); misafoaka amin’Andriamanitra (12-16). Toa tsy fahendrena tokoa! Mety ho voafitaka anefa isika. Ao amin’ny Tenin’Andriamanitra ihany no misy fahendrena sy fahamarinana, ary hamantarana ny sitrapon’Andriamanitra. Fa ny tanora na ny zaza izay manana ny Tenin’Andriamanitra dia manan-tsaina sy hendry kokoa noho ny antitra fotsy volo (10).
Ny anjaran’ny ratsy fanahy (17-35). Ny traikefany sy ny fahalalan’ny zokiolona indray no nentin’i Elifaza hampieritreritra an’i Joba. Notanisainy ny tahotra izay iainan’ny ratsy fanahy, ny fisesisesin’ny zava-dratsy izay manjo azy ireo, arakaraka ny fahadisoany. Tsy mijery fotsiny ny ratsy fanahy tokoa Andriamanitra fa manafay. Kanefa mahari-po sady be famindram-po Izy ka mananatra, ary manenina ny amin’ny loza izay lazainy fa ataony raha mibebaka marina ny olona.
Fampitandremana: Raha misy olona azom-pahoriana entin’ny Tompo eo aminao, aza maika ny hanameloka hoe ny fahotany no mahatonga izany, fa fantaro aloha ny sitrapon’Andriamanitra, sao fizahan-toetra ny finoany izany.
Fampaherezana: «Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa, raha iharan’ny fakam-panahy na fizahan-tœtra samy hafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-tœtra ny finoanareo dia mahatonga faharetana.» (Jakoba 1:2-3)